Sirdoonka Soomaaliya oo qabtay nin katirsanaa Al Shabaab & Faahfaahin ka soo baxaysa – Puntlandtimes
April 24, 2019 W LAASCAANO
MUQDISHO(P-TIMES)- Sidda ay barteeda Twitterka ku sheegtay Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA waxaa lagu qabtay howlgal laga fuliyey gudaha Muqdisho, mid kamid ah saraakiisha Sare ee kooxda Al- Shabaab, kaas oo howlgalo kafulinayay gudaha caasumada.
NISA ma aysan sheegin magaca iyo xilka uu Al- SHabaab ka hayay sarkaalka ay qabteen, balse warar madax banaan ayaa sheegaya in uu kamid ahaa xubnaha talada ugu dambeysa ku leh weerarada laga fuliyo gudaha Muqdisho.
Howlgalka lagu soo qabtay sarkaalkan ayaa kadhacay degmada Shibis ee gobalka Banaadir, waxaana la weeraray goob gurri ah oo uu ku sugnaa, iyadoo la sheegay in laga soo qabtay goobtaas hub kala duwan oo uu haystay sarkaalkan.
Baacsiga u dhaxeeya Sirdoonka dawladda Faderaalka Soomaaliya iyo kan Shabaabka ayaa inta badan ka socda gudaha caasumada dalka, waxaana marar badan la qabtaa sarakiil Shabaab kuwaas oo dib NISA ugu adeegsato in ay u soo jaajuusaan kooxdooda.
Amniga gobalka Banaadir ayay dawladda Faderaalku dadaal badan galinaysaa sidii loo sugi lahaa, xili dhawaan ay dhaceen weeraro dhimasho badan sababay, kuwaas oo u badnaa qaraxyo, magaaladana keenay in dhawr qeybood loo kala xiro.